Abavakashi base-Ukraine u-Admire Kayseri - RayHaber
IkhayaTURKEYIsifunda sase-Central Anatolia38 KayseriAbavakashi base-Ukraine u-Admire Kayseri
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 38 Kayseri, I-38 Ukraine, Isifunda sase-Central Anatolia, European, UMHLABA, JIKELELE, TURKEY, TELPHER 0
Abavakashi abangamaChrist bayayithanda i-kayseriye
Umasipala waseKayseri Metropolitan uyaqhubeka nokwazisa amanani omlando kanye nemvelo yeKayseri, ikakhulukazi i-Erciyes Winter Tourism Center. IMeya kaMasipala weMetropolitan UMemduh Büyükkılıç wahlangana nabavakashi base-Ukraine e-Erciyes.
Ngomsebenzi kaMasipala Metropolitan, intshisekelo yabavakashi bezokuvakasha e-Ukraine eKayseri iyanda. IMeya kaMasipala weMetropolitan UMemduh Büyükkılıç, wahlangana futhi wakhuluma nezinhlaka zezokuvakasha ezivela kwa-Erciyes aqhamuka e-Ukraine. Kwabanjwa umhlangano nezivakashi zase-Ukraine e-Erciyes nase-Erciyes A.Ş. USihlalo weBhodi UMurat Cahid Cıngı wenze isethulo esibanzi mayelana namanani ezokuvakasha akwaKayseri.
Ngesikhathi sobusika bokugcina, i-4, inhlokodolobha yanyanga zonke e-Ukraine naseKiev ngezindiza ezishintshashintshayo phakathi kweKayseri ne-Istanbul ngokudluliselwa kwezivakashi zase-Ukraine ezingaba yizinkulungwane ezingama-6 zikhumbuza ukuthi bamukele uMongameli Mayor uMay Büyükdılıç, Amaphesenti we-100 wabo bonke abavakashi athe ngokujabula ashiye idolobha lethu. Abavakashi base-Ukraine nabo baveze ukuthi bathanda uMongameli weKayseri Büyükkılıç, kulo nyaka kuzonyuka isibalo sezindiza ezishisayo.
Abavakashi baseDenizli baya e-Bağbaşı Plateau ngemoto yekhebula 22 / 01 / 2016 Imoto uhambo encane ukuze Denizli ezokuvakasha Denizli Imeya Osman Zolan, Denizli Association of siKotilandi abanikazi bamahhotela futhi Operators (DENTUROD) Denizli ikhebula izimoto Bağbaşı elalihlangana Plateau. Denizli Denizli ezokuvakasha okunye kuletha umoya omusha emotweni ikhebuli Bağbaşı Plateau, kulokhu isingathwe Denizli vocations. 28-31 owawuzoba Istanbul phakathi kukaJanuwari no-East Mediterranean International Tourism and Travel Fair (EMITT) Denizli izivakashi abanikazi bamahhotela Association abazohlanganyela e Denizli Umasipala uxhaso (DENTUROD) amalungu eBhodi, ehlangana Imeya Osman Zolan . IMeya kaMasipala waseDenizli Metropolitan, Yay
Izivakashi zihlushwa emgwaqweni 23 / 02 / 2015 Izivakashi zihamba emgwaqweni: I-Kemer Association of Touristic Hoteliers kanye ne-Operators (KETOB) yavakashela i-Regional Directorate of Highways futhi yahambisa izinkinga zayo mayelana nemisebenzi yomgwaqo. U-KETOB uMengameli Tayyar Gül kanye nelungu lebhodi u-Ali Balaban uvakashele uMqondisi wesiFunda we-Highways Şenol Altıok. U-KETOB uMengameli Gül, ikakhulukazi ngenkathi umsebenzi wokwakha umgwaqo uyenzeka ngenxa yezokuvakasha ezinzima, usho kanje. U-Tayyar Gül uthe abavakashele basekhaya nabangaphandle kumele balinde emgwaqeni ngenxa yokusebenza komgwaqo ngezikhathi ezithile, nokuthi amabhasi ejensi azisa izivakashi ku-Kemer aphelile ukuhanjiswa kwezindiza ngenxa ye-yol
Izivakashi zaseSerbia eDenizli 24 / 11 / 2018 UMasipala waseDenizli Metropolitan ubambe u-Aleksandra Dejanovic, ummeleli weBelgrade Turkish Airlines eSerbia kanye nabamele abamele ezokuvakasha. Ukuze agcizelele ukuthi ezokuvakasha sinenai jikelele Denizli Denizli Imeya Osman Zola, "Beautiful, enhle Denizlimiz amagugu zemvelo, zomlando namasiko ezinkanyezi Turkey obukhazimulayo," esho. IMeya kaMasipala waseDenizli Metropolitan u-Osman Zolan usingathe u-Aleksandra Dejanovic, ummeleli weSerbia Belgrade Turkish Airlines nabamele abamele ezokuvakasha. IMeya u-Osman Zolan, obambe izivakashi zayo e-Çamlık Mesireliği, uthe iDenizli inamagugu wokuvakasha emhlabeni jikelele futhi yathi idolobha liba nezivakashi ezingaphezu kwezigidi ezingama-2 minyaka yonke. Ukuze ukhulise amandla ezokuvakasha eDenizli Denizli
Ukwethulwa kwePalandöken kuma-Agencies okuvakasha ase-Ukraine 22 / 12 / 2012 Ngaphakathi kwemikhakha yokugqugquzela ezokuvakasha ehlelwe ngokuhlanganyelwe yi-Erzurum Governorship neNyakatho-mpumalanga ye-Anatolia Development Agency, abaphathi bama-ejensi wokuvakasha e-Ukraine bathuliswa izindawo ezihlobene nokuvakasha kwasebusika e-Erzurum. I-Palandöken Ski Centre ihlangana nomhlangano ophethwe ehhotela nabaphathi be-Erzurum Governor Sebahattin Öztürk nabakwa-KUDAKA abaphathi be-Erzurum nesikhungo sezemidlalo sasebusika, ehambisana nama-slides athulwe. Echaza ukuthi inani lezivakashi ezivela phesheya likhuphuka nsuku zonke, uMbusi we-Erzurum Sebahattin Öztürk uthe, "I-Erzurum iye yaba yikhungo sezemidlalo ebusika emhlabeni. Izakhiwo zezemidlalo eziningi zasebusika azitholakali kulezi zakhiwo ziyatholakala e-Erzurum. Ukrainian ...
Abagibeli besitimela base-Ukraine Raise Surprise 15 / 08 / 2019 I-Ukraine Railways Ukrzaliznytsia, ehlela ukwenyuka kabili kwamanani amathikithi e-2019, iphinde yamemezela isidingo sokwenyusa amanani entengo yokuhamba kwabagibeli. Umongameli we-Ukrzaliznytsia u-Yevgeni Kravtsov uthe imisebenzi yase-Ukrzaliznytsia ayinanzuzo njengamanje futhi uhulumeni uzofaka isicelo sokuvumela ukuthi kukhuphuke amanani amathikithi ukuze kuhlangatshezwane nezindleko zokuhamba. UKravtsov uthe izimoto “ze-Ukrzaliznytsia” kumele zandiswe futhi ziqinisekise ukuthi imisebenzi yenkampani ayikho ngaphansi kwezindleko ”. Ubuye wengeza ngokuthi le mikhumbi kumele inyuswe yi-15-20 ukuze ihlangabezane nesidingo ikakhulukazi ngezikhathi zokuphakama. IVar Manje sekunezinqola eziyizinkulungwane ezintathu, kudingeka amanye amakhulu amahlanu, kusho uKr Kravtsov. Ngokuthuthwa kwabagibeli…
Abavakashi baseDenizli baya e-Bağbaşı Plateau ngemoto yekhebula
Izivakashi zihlushwa emgwaqweni
Izivakashi zaseSerbia eDenizli
Ukwethulwa kwePalandöken kuma-Agencies okuvakasha ase-Ukraine
Abagibeli besitimela base-Ukraine Raise Surprise
AmaJalimane ayakujabulela ukutshala izimoto ze-Olympos cable
Abafundi bakaKonya abathandayo iBoztepe bethandwa kakhulu ibutho
Usihlalo weKomiti Yezemidlalo YaseYurophu Yemidlalo Yokwamukela Izakhiwo E-Erzurum
I-ambassador yesiPutukezi ku-Ankara Iprojekthi ye-Erciyes ekhuthaziwe